Naqshadeeyayaasha Websaydhka ee ka soo horjeedka Horumarinta Webka | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 18, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Had iyo jeer way fiicantahay inaad yeelato waxoogaa qosol ah oo ku saabsan faahfaahinta. Midkani wuxuu xiiseeyaa xoogaa xiiso u dhexeeya naqshadeeyayaasha bogagga iyo horumariyeyaasha bogagga. Runta haddii loo sheego, in kastoo, waxaan ku qiimeeyaa naqshadeeye weyn sidii aan u sameeyo horumariye weyn. Waxaa jira dalabyo qurxoon oo banaanka yaala oo si liidata u horumarsan laakiin u iibiya sida hotcakes. Dhinaca ka soo horjeedka, waxaa jira codsiyo aan caadi ahayn oo halkaa ka jira oo aan iibinaynin darn maxaa yeelay waxay si fudud ugu muuqdaan kuwo xasilan.
Nakhshadeeyayaasha Shabakada iyo Kuwa Sameeya Webka waxaa kuu soo gudbinaya Wix.com
Isticmaal naqshad hal abuur leh si aad u sameyso a Websaydh bilaash ah.
21 Shuruudaha Suuqgeynta si aad ugu qanciso / uga xanaajiso asxaabtaada
Agoosto 18, 2011 saacaddu markay ahayd 4:58 PM
Tani waa mid ka mid ah waqtiyadayda oo dhan. Waxaan marki uhoreeyay arkay Nofeembar sanadkii hore. Si fiican ayaa loo qabtay!